Manandratra ny firaisankina ao anatin’izao krizin’ny COVID-19 izao ny hiran-tahaka nalaza tamin’ny Eurovision avy ao Moldavia · Global Voices teny Malagasy
Nandefa hafatra ho an'i Renin'i Moldavia ny Epic Sax Guy
Voadika ny 04 Mey 2020 10:13 GMT
Vakio amin'ny teny українська, Italiano, Español, Français, русский, عربي, Română , 日本語, македонски, polski, srpski, Български, 한국어, Magyar, Esperanto , English
Pikantsary avy amin'ny video YouTube “Mom, stay home,” [Neny, mitoera an-trano] avy amin'ny tetikasa Sunstroke Project.
Ny tantara etoana dia nivoaka voalohany tao amin'ny Meta.mk News Agency, tetikasan'ny Metamorphosis Foundation. Navoaka eto ambany ny endrika nasiam-panovana noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty. Zahao ny pejy manokan'ny Global Voices momba ny fiantraika manerantanin'ny COVID-19.
Ao Moldavia, navadiky ny tarika mpihira pop-rock Sunstroke Project ho amin'ny fanabeazana ao anatin'izao areti-mandringana COVID-19 izao ny hirany nifaninanana tao amin'ny Eurovision taona 2017 mitondra ny lohateny hoe “Hey Mama”.
Nampitondraina ny lohateny hoe “Mom, stay home,” [mama, mitoera an-trano] ny hiran-tahaka hanentanana ny olom-pirenena hanaraka ny fandrisihan'ny Fikambanana Manerantany misahana ny Fahasalamana (WHO-OMS) sady mandefa onja tsara ho an'ireo zokiolona, izay marefo indrindra amin'ity aretina ity.
Nohiraina tamin'ny fiteny rosiana sy romaniana izy ity ary navoaka YouTube nasiana dikantsoratra anglisy.
Na dia ny teny Romaniana aza no fitenim-panjakana ao Moldavia, dia manana ny sata maha-fitenim-paritra azy avokoa ny fiteny rosiana, okrainiana ary gaogaziana. Ny teny rosiana no fiteny be mpiresaka indrindra ao amin'ny faritra rehetra ao Moldavia.
Hatramin'ny fotoana nanoratana ny teny anglisy, dia nahitana tranga COVID-19 miisa 298 ka roa no maty tamin'izany tao Moldavia, firenena iray ahitana mponina miisa 2,6 tapitrisa. Tahaka ny ankamaroan'ny firenena eoropeana, nilaza fepetram-piarovana hampihisarana ny fielezan'ny coronavirus vaovao ny governemanta, ka tafiditra amin'izany ny fanokana-monina ny tena mandritra ny tapabolana.
Fahombiazana tamin'ny Eurovision
Tamin'ny alalan'ny fifaninanan-kira Eurovision tamin'ny taona 2010 no nanombohan'ny Sunstroke Project raha nampifaninana ny hirany mitondra ny lohateny hoe “Run Away.” Na dia naka ny laharana faha-22 — tamin'ireo 39 nifaninana — aza ny hira dia nalaza aoka izany. Amin'izao fotoana izao ny lahatsariny ofisialy dia nahazo jeripejy mihoatra ny 10 tapitrisa ao amin'ny YouTube.
Namokatra sary-sy-soratra (meme) [mg] malaza ihany koa io hira natao tamin'ny Eurovision io: ny saxophonistan'ny tarika, Sergej Stepanov, no ilay “Epic sax guy,” ilay sary-sy-soratra mbola malaza hatramin'ny androany, ka ampolony ny karazan-tsary nivoaka.
Noho ny lazan-dry zareo tamin'ny aterineto, nifaninana ho solontenan'i Moldavia indray ny Sunstroke Project tamin'ny Eurovision 2017, tamin'ny hirany mitondra ny lohateny hoe “Hey Mama” nahitana tonony tamin'ny teny anglisy. Mbola nahitana “solo” tamin'ny sax ihany ny hira tamin'ity indray mitoraka ity.
Tafiditra ho laharana fahatelo ny tarika tamin'io fifaninanana natao tao Kyiv, Okraina, taona 2017 io. Io no laharana tsara indrindra azon'i Moldavia tamin'io fifaninanana io.
Nokasaina hotontosaina tao Rotterdam, Holandy, amin'io volana mey io ny fifaninanana Eurovision taona 2020, saingy nofoanana noho ny areti-mandringana COVID-19.
Rosia 4 ora izay
Rosia 13 ora izay